Landa i-YouTube Video Thumbnail Image - Sekela amawebhusayithi amaningi
Landa i-YouTube Video Thumbnail Image
❤ Landa zonke izithombe zesithonjana zevidiyo ye-YouTube ngaleli thuluzi elilula.
Ukuthola isithonjana sevidiyo yanoma iyiphi i-YouTube Video faka i-URL ejwayelekile yevidiyo ebhokisini lombhalo elingezansi.
⚠ I-URL yakho kufanele ibukeke kanjena:
Thola Isithonjana se-YouTube
Leli sayithi likuvumela ukuthi ulande izithonjana zamavidiyo e-YouTube ngokufaka i-URL yevidiyo.
⚠ Inkinobho yebhukumaka inenguqulo entsha. Vuselela manje.
⚠ Amanye amanethiwekhi omphakathi adinga ukulayisha kabusha ikhasi olibukayo njengamanje ukuze uthole isithonjana esifanele.
♳ Iseva 1
♴ Iseva 2
♵ Iseva 3
✚ Faka kusiphakamiso
❝Khulisa ukubukwa kwamavidiyo ngokungeza iziphakamiso❞
☀ Isithonjana Grabber sisekela ukulandwa kwezithonjana kusuka Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, DailyMotion, Vimeo, Tumblr, Imgur, Liveleak, TED, Mashable, 9gag, Break, Soundcloud, Flickr, ESPN, IMDB, Buzzfeed, Okru, Metacafe, WorldStarHipHop futhi nokuningi. ☁
Kungani ukhethe leli thuluzi elihle?
Fast and free hhayi ukufutheka
Amathuluzi amaningi angeziwe
Sekela amawebhusayithi amaningi
❝Uhlu lwezithombe lugcinwa kuphela kudivayisi yakho❞
♻ Sula Umlando
Chofoza inkinobho yeziphakamiso ukuthola imibono emihle.
Uma usebenzisa iMac OS X
Khipha i-Youtube Poster
Thola zonke izithonjana zevidiyo ye-YouTube ngokuchofoza okukodwa.
Thola Isithonjana 2.0 ← Hudula lokhu kubha yakho yokubekisa amabhukumaka
❝Lo mbhalo ungakhipha iphosta yevidiyo kunoma iyiphi iwebhusayithi.❞
Ungayisebenzisa kanjani i-YouTube Thumbgins Image Generator
Isinyathelo 1 : Faka i-URL ye-YouTube
Kopisha bese unamathisela i-URL yevidiyo ye-YouTube enkambini enikeziwe.
Isinyathelo 2 : Qhafaza ❝Thola Isithonjana se-YouTube❞
Ukuze ubuke kuqala bese ulanda isithombe esincane se-YouTube, chofoza inkinobho ye-Orange
Isinyathelo 3 : Thola isithonjana sevidiyo ye-YouTube
Landa isithombe sesikrini esingu-YouTube ku-YouTube ngekhwalithi ephezulu nosayizi
Buka kuqala ngaphambi kokulanda
Njengoba uchofoza inkinobho ethi Hambisa ngemuva kokunamathisela i-URL yevidiyo, ukubonwa kuqala kwazo zonke izithombe zesithonjana kunikezwe. Ungahlola usayizi wesithombe sesithonjana bese uchofoza inkinobho yokulanda ukuze ugcine izithonjana zamavidiyo e-YouTube kudivayisi yakho.
Khetha isithombe sakho esihle kakhulu
Thola isithonjana sevidiyo ye-YouTube ngosayizi ohlukene njengokukhetha kwakho. Lapho ungachofoza inkinobho yokukhipha, isithonjana sokuhlola kuqala isayizi eningi sinikezwe. Ungakhetha usayizi wesithonjana phakathi kwe-480x360, 120x90, 320x180, 1280x720 bese uyikhipha.
I-YouTube Thumbgins Image Extractor iyisevisi eku-inthanethi ekuvumela ukuthi ubuke kuqala futhi ulande izithombe zesithonjana kusuka kuvidiyo ye-YouTube ku-HD. Ungathola Isithonjana isithombe kusuka ku-YouTube kunoma iyiphi ipulatifomu yakho oyithandayo efana nedivaysi ye-Windows, i-Linux OS, umshini weMac, i-Android, noma i-iPhone.
Mahhala Nezilinganiso Zero Zero
Kuyinkonzo yamahhala ekwi-inthanethi ukusindisa isithombe se-YouTube Isithonjana. Udinga nje ukufaka isixhumanisi bese uthola i-Thumbnail Image ye-YouTube Video ngemizuzu. Ngaphezu kwalokho, insizakalo mahhala kunoma yikuphi ukukhawulelwa. Kusetshenziswe ngokuphelele esipheqululini futhi kungafinyeleleka kusuka kunoma iyiphi ipulatifomu noma idivaysi.
Thola Imibuzo Yakho Nezimpendulo Lapha - Ungawalanda Kanjani Ama-YouTube Video Thumbnails?
+ Yini isithonjana?
Izithonjana zenziwa kahle kumakhasi e-web njengoba ehlukile, amakhophi amancane wesithombe soqobo, ngokwengxenye ngoba inhloso eyodwa yesithombe esincane ekhasini le-webhu ukwehlisa umkhawulokudonsa nesikhathi sokulanda.
Abanye abaklami bewebhu bakhiqiza izithonjana nge-HTML noma ukubhala uhlangothi lwekhasimende okwenza isiphequluli somsebenzisi sinciphise isithombe, kunokuba sisebenzise ikhophi elincane lesithombe.
+ Ngingakwazi ukukhipha zonke izithonjana zevidiyo ye-YouTube kuvidiyo yami ngokulungiswa okuphezulu?
Yebo, ungakhipha kalula futhi ulande zonke izithonjana zevidiyo yakho ye-YouTube ngokusebenzisa le nsiza yokulanda.
Mane nje ulandele lezi zinyathelo ezingezansi ukuze uthole isithombe esincane esivela kuvidiyo ye-YouTube:
Vula ikhasi lewebhu le-YouTube Video Thumbgins Downloader.
Vakashela ku-YouTube.com bese Kopisha isixhumanisi sakho se-YouTube Video
Namathisela ebhokisini le-Enter YouTube Video Link.
Chofoza inkinobho ethi Khipha ukuze ubambe ngokushesha zonke izithonjana zevidiyo yakho.
Umlandeli wethu Wezithonjana Zevidiyo we-YouTube uzobonisa ngokushesha zonke izithonjana ze-YouTube ezikhishwe kuVidiyo yakho.
Ungahlola kalula zonke izithombe zeThumasho bese uhlola usayizi wazo kuma-pixels.
Uma udinga ukulanda, ungalanda futhi i-YouTube Video Thumbnails ngokuchofoza inkinobho yokulanda.
Jabulela ukukhipha Izithonjana Zevidiyo Yakho.
Udinga ukwenza izinyathelo ezilula ezingenhla ukuze usindise izithombe zakho ze-YouTube Video Thumbgins.
+ Sithini isithonjana se-YouTube?
Izithonjana zevidiyo ye-YouTube zitholakala ngezimfanelo ezine ezahlukahlukene kanye nobukhulu: SD 640 x 480, MQ 320 x 180, HQ 480 x 360, HD 1920 x 1080.
Ungangena kunoma yisiphi isithonjana sesayizi sevidiyo ye-YouTube kusuka kwifomethi ejwayelekile. Udinga nje i-ID yevidiyo eyingqayizivele, engabukwa ku-URL yevidiyo.
Isithonjana Sesithombe Sombhalo: http://img.YouTube.com/vi/video_id/FILE_NAME.jpg
Ungachaza igama lefayela ngokuya ngosayizi wesithonjana osifunayo. Ezinye ezisetshenziswa kakhulu zibhalwe ngezansi:
http://img.YouTube.com/vi/video_id/0.jpg – Usayizi ogcwele
http://img.YouTube.com/vi/video_id/default.jpg – Usayizi ogcwele
http://img.YouTube.com/vi/video_id/mqdefault.jpg – Okuzenzakalelayo Medium
http://img.YouTube.com/vi/video_id/maxresdefault.jpg – Isixazululo Esiphezulu
http://img.YouTube.com/vi/video_id/1.jpg – Encane
http://img.YouTube.com/vi/video_id/2.jpg – Encane
http://img.YouTube.com/vi/video_id/3.jpg – Encane
+ Iyini inhloso ye-YouTube Thumbgins Grabber noma iGenerator?
Isisusa esiyinhloko salo Menzi Wezithonjana ze-YouTube ukuthi ungalanda & Thola Izithonjana Zezithombe Ze-YouTube Video kunoma yisiphi usayizi kusuka kunoma iyiphi ividiyo. Zonke lezi zithombe ziwusizo ngempela emsebenzini oqhubekayo njengokubloga, ukuklama, noma ukwaba nabanye.
+ Yikuphi konke ukukhetha usayizi ongakulanda noma ukudala isikrini se-splash yevidiyo?
Lesi Sithonjana Se-YouTube Isithonjana Somfanekiso sinikezela ngezinketho ezine ezihlukile ngenkathi sisindisa isikrini:
+ Yini usayizi wesithonjana se-YouTube 2019?
Isithonjana se-YouTube ngokwezifiso zesithonjana kufanele sibe sikhulu ngangokunokwenzeka, njengoba isithombe sizosetshenziswa futhi njengesithombe sokubuka kuqala kumdlali oshumekiwe. I-YouTube incoma izithonjana zakho zokwenza ngokwezifiso: Yiba nesinqumo esingu-1280x720 (ngobuncane bobubanzi bamaphikseli ayi-640).
+ Ngisithatha kanjani isithombe ngesithombe sevidiyo?
Misa okwesikhashana ividiyo endaweni lapho ufuna ukuthwebula khona isithombe, sebenzisa i-Phrinta Screen noma Ithuluzi Lokuthwebula ukuthola isithombe.
+ Usithola kanjani isithombe se-YouTube ku-YouTube?
Namathisela i-url yakho ye-YouTube ebhokisini lemibhalo elingenhla ukuthola usayizi wezithonjana.
+ Siyini usayizi wesithombe sekhava ku-YouTube?
I-YouTube Cover Photo / Ubuciko besiteshi: 2560 x 1440 pixels.
I-YouTube izokwengeza ubuciko besiteshi sakho ngokusebenzisa idizayini yewebhu ephendulayo. I-YouTube incoma ukulayisha ubuciko besiteshi kumaphikiseli angama-2560 x 1440 ngosayizi wefayela ongu-2MB.
+ Ngiyithola kanjani ikhodi yokushumeka yesithonjana se-YouTube?
Kukhona okulula kakhulu ukubuyisa izithombe zakho zesithonjana se-YouTube zevidiyo ethile.
Vele uye ku-URL elandelayo: http://i1.ytimg.com/vi/Your-video-id/hqdefault.jpg
Manje, uzodinga ukulanda i-id yevidiyo evela ku-Url yevidiyo noma ikhodi yokushumeka yevidiyo ye-YouTube.
+ Ngisilingisa kanjani isithombe esivela kwi-YouTube?
Thola i-id yakho yevidiyo kusuka ku-YouTube futhi unamathisele kubhokisi lombhalo elingenhla, chofoza inkinobho ❝Thola Isithonjana se-YouTube❞.
+ Iyini i-URL evidiyo ye-YouTube?
+ Ungenza kanjani download isithonjana 1080p?
Ukulungiswa okuphezulu kwezithonjana zevidiyo ye-YouTube yi-1280x720.
Izithonjana eziyi-1080p azitholakali.
Kufanele usebenzise inhlanganisela yokhiye wokuphrinta isikrini ukuthola isithombe.
Cindezela Alt + Print Screen.
Amanye amamodeli angabhala ukhiye wokuphrinta wesikrini ococekile PrtScn, Prnt Scrn, Print Scr.
Uma usebenzisa iMac OS X, Cindezela Shift + ⌘ + 3
+ Kuphephile yini ukusebenzisa le nsiza yokulanda isithonjana se-YouTube?
Ukuphepha kuyinto eza kuqala kithi, ngakho-ke lonke ithrafikhi ledatha yale webhusayithi lifakwe nge-SSL. Ngale protocol yenethiwekhi evikelekile, idatha yakho ivikelekile ekufinyelelekeni ngabantu besithathu. Ukulandwa kwezithombe zangempela zesithonjana kusebenza ngokuxhumeka okuvikelwe ngokuqondile kumaseva we-YouTube.
Faka i-Play Button ku-Image Online
Thola i-YouTube Video Screenshot Online
Thatha isithombe-skrini kusuka endaweni yangokwezifiso
Gcina imibhalo engezansi yevidiyo ye-YouTube
Sikusize ukulanda amavidiyo nomsindo ngokushesha kusuka kunoma iyiphi iwebhusayithi (ngaphandle kwe-YouTube)
Umphathi Wokubhaliswa kwe-YouTube
I-Colour Changer ye-YouTube
Fihla amazwana e-YouTube
Imodi Yomsakazo ye-YouTube
I-Equalizer ne-Amplifier ye-YouTube
Izingoma Ezintsha Ezintsha
Ukuthi isithonjana se-YouTube sangokwezifiso kukusiza kanjani ukubukwa okuningi
Ufuna izithonjana ezinhle kakhulu ze-YouTube? Ufuna ukuthola ugqozi lokwakha imiklamo yakho eyingqayizivele yesithonjana? Usendaweni efanele!
Ukudala izithonjana ngokwezifiso akuyona nje indlela enhle yokuphakamisa umkhiqizo wakho wonke, kodwa futhi kuyindlela yokuthonya ababukeli ukuba bakhethe ividiyo yakho kuzo zonke izinketho ezitholakalayo. Cha, isithonjana sangokwezifiso ngeke senze okuqukethwe kwakho kube ngcono kunokuba kunjalo ngakho-ke kubalulekile ukugxila ekudaleni okuqukethwe kwekhwalithi - kepha isithonjana sizosiza okuqukethwe kwakho okumangazayo ukuthi kuqashelwe!
Ukwakha izithonjana ezinhle zamavidiyo we-YouTube
Njengoba kushiwo ngenhla, ufuna ukuthi izithonjana zakho zifakwe uphawu futhi zibandakanyeke. Kunezici ezimbalwa ezijwayelekile esizibonile kwizithonjana ze-YouTube ngezansi.
Into eyinqangi noma into engaphansi
Ngaphezu kwalezi zici ezingenhla, bekucacile futhi ukuthi ukudala ama-cutout, noma izithombe ezifihliwe, zesifundo esiyinhloko kwakuyinto ethandwa kakhulu yokuklama kulabo abanesikhathi, imali, abasebenzi, noma ikhono elidingekayo lokusikhipha.
Okwenza Izithonjana ze-YouTube Zibaluleke
Ukuqamba izithombe ze-YouTube kuhluke kakhulu kunokuqamba amanethiwekhi omphakathi noma ukudala izithombe zokukhangisa kuwebhu. Ngani? Ngoba umkhiqizo wakho kuzodingeka ukuncintisana nenqwaba yeminye imikhiqizo.
Isithonjana, kude, yisici esidonsela ukunaka kakhulu ngaphandle kokubheka ngqo kuso.
Izindaba ezimnandi ukuthi ungahlala ubuyela emuva kunoma iyiphi ividiyo kulabhulali yakho futhi uvuselele izithonjana ngokuzayo uma ngabe izithonjana zakho ze-YouTube yangokwezifiso bezingabi yilokho obukufuna.
Imikhiqizo eyengeziwe enezithonjana ezilula
Akuyona yonke imikhiqizo ephuma endleleni yabo yokudala ngokwakhiwa kwabo kwesithonjana se-YouTube. Empeleni, iziteshi eziningi azenzanga lutho - azikhethanga nesithonjana esithandekayo.
Ukudala Imiklamo Yakho Yesithonjana Se-YouTube
Okunye okumele ukukucabangele ubukhulu bemiklamo yakho. Ngamanye amagama, ingabe uzophishekela idizayini ebonwe ngokwengeziwe edinga ukuthi uguqule ingemuva, umbhalo kanye nemibala noma uzophishekela umklamo ozodinga umdwebi okhombisa ubuciko ukwakheka okusha?
Imiklamo ye-NBA iyisibonelo esihle semiklamo eyenziwe yatholakala ukuthi kulula ukuyenza. Noma ngubani onamakhono okuqamba ayisisekelo angakha kalula izifanekiso ezintsha ngokuqukethwe okubuyekeziwe.
Ungasenza kanjani isithonjana sakho se-YouTube?
Akuyona inkinga leyo. Uma wazi ukusebenzisa i-Photoshop ungasenza kalula isithonjana se-viral samavidiyo akho noma ungasebenzisa noma yimuphi umenzi wesithonjana se-YouTube we-inthanethi nesifanekiso se-Photoshop.
Isithonjana sakho sangokwezifiso kufanele sibe sikhulu ngangokunokwenzeka, njengoba isithombe sizosetshenziswa futhi njengesithombe sokubuka kuqala kumdlali oshumekiwe. Iba nesinqumo esingu-1280x720 (ngobuncane bobubanzi bamaphikseli ayi-640). Layisha ngezithombe ezinjenge-JPG, GIF, BMP, noma i-PNG.
Izindlela eziyi-10 zokuthola okuningi ku-YouTube
Landela la maphuzu alula ayi-10 noma ngaphezulu ukusiza ukukala amavidiyo akho e-YouTube ukuthola ukubukwa okuningi namaDola kuwo.
⓵ Musa ukuchitha isikhathi sakho ukuze ulayishe amavidiyo ngaphandle kokuqukethwe okuhlobene nesiteshi se-YouTube okwakho.
⓶ Qamba kabusha ividiyo yakho ngesihloko bese uyayilayisha ku-YouTube. Bhala incazelo ethandekayo yamagama angama-300 evidiyo yakho bese unamathisela isihloko sakho emugqeni wencazelo.
⓷ Namathisela isihloko sakho sevidiyo njengoba kunjalo kumathegi. Sebenzisa njalo igama lesiteshi sakho njengethegi. Kuyasiza ukukhombisa amavidiyo esiteshi sakho kusikisela futhi ungakhohlwa ukufaka amathegi evidiyo efanele kodwa kufanele uwayisebenzise ekuchazeni ngaphambi kokuwasebenzisa njengethegi. Ngaphandle kwalokho kuzocabanga njengokugaxekile.
⓸ Ngeza izixhumanisi zakho zokungena kwamavidiyo namakhasi ezokuxhum axhumene nencazelo. Yabelana ngevidiyo ku-Twitter noma ku-Instagram nge-hashtag bese uzama ukungeza enye yamathegi athambelayo.
⓹ Thola ividiyo ehlobene ne-niche yakho ngokusebenzisa amathegi we-Twitter athambekele bese uyilayisha esiteshini sakho bese wabelana ngethegi efanayo yokuhamba. Ngokwenza lokhu kunamathuba amaningi okuthi amavidiyo wakho aqhubeke abe negciwane futhi uma aya ngegciwane ke nakanjani uzothola okuningi ngokufaka nje ukulayisha amavidiyo e-YouTube. Futhi Yabelana ngeBlogger, Reddit, Tumblr, Pinterest, Google Plus ne-Facebook ngomaki.
⓺ Thola ividiyo ethambelayo kusuka ku-Google Trends ehlobene ne-niche yakho bese ulula ividiyo kuyo bese uyilayisha esiteshini sakho. Ngale ndlela wenza amathuba amaningi wevidiyo yakho yokuthola igciwane emphakathini.
⓻ Uma wazi ngokukhangisa okuhambisana nakho kungakusiza ukuthi uthole amadola amaningi esiteshini sakho. Khetha umkhiqizo ofanele ohlobene ne-niche yakho bese wenze ividiyo yokubamba kuwo bese uyilayisha. Ngemuva kokulayisha unamathisela isixhumanisi sakho esixhumene naye kulayini wokuqala wencazelo ukuze kuthi uma othile enze isimo sakhe sokuthenga athenge umkhiqizo wakho angalandela isixhumanisi sakho ukuze asithenge. Ngakho-ke ukusebenzisana kuyindlela enhle yokuthola okuningi.
⓼ Gxila kwikhwalithi hhayi kuningi futhi usebenzise amagama aphezulu we-cpc. Landela lezi zeluleko ezilula zokuthuthukisa ukubukwa kwesiteshi sakho okuzokusiza ukuthi uzuze okuningi ku-YouTube.
⓽ Target amazwe we-premium ukuthi abe nesilinganiso esihle se-cpc futhi athole igama eliphambili le-cpc.
⓾ Benze isithombe sakho se-YouTube esithambisayo sevidiyo yakho ukuze abantu bakuthole kuthakazelisa. Uma ungazi ukuthi ungenza kanjani isithonjana se-YouTube ngokwezifiso ungamane ukopishe kusuka kulawo mavidiyo ahehayo futhi ahlobene nevidiyo yakho. Isithonjana esithandekayo ngaso sonke isikhathi sidonsa abantu ukunakwa futhi sibaphoqelele ukubuka leyo vidiyo. Ngakho-ke gcina engqondweni.
Gcina izithombe zevidiyo ye-youtube ne-vimeo yazo zonke ikhwalithi mahhala. Lolu hlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ulande izithonjana zawo wonke amakhwalithi. Vele unamathisele i-URL yevidiyo yesithonjana kokufaka okungezansi bese uqhafaza ku-Thola Isithonjana Image.
I-YouTube Thumbgins Grabber ehamba phambili - Gcina amaTekhna eevidiyo e-YouTube
Landa isithombe samahhala se-youtube amavidiyo wesithombe ku-Full HD (1080), HD (720), SD, futhi ngosayizi omncane. okwamanje kusekelwa amafomethi: YouTube (HD, HQ, 1080p, 4K)
I-copyright © 2019
Khombisa ukusekelwa kwakho bese wabelana ngale webhusayithi:
Ngisebenzise le nsiza yokulanda isithonjana ukudala izikhala zesikhala sephrojekthi yami ezayo. Isindisa isikhathi esinjalo, mhlawumbe sizongongela amahora wesikhathi sisonke futhi sisebenza ngokuphelele.